Sakafo hariva any Krismasy | Fitsangatsanganana tanteraka
Sakafo hariva any Krismasy
Misy Kristiana 2.400 miliara eto amin'izao tontolo izao izay mankalaza ny Krismasy amin'ny fomba hafa, araka ny fomban-drazan'ny firenena tsirairay sy ny antokom-pinoana kristiana misy azy. Amin'ity fotoana ity dia hiresaka ny fomba hankalazana io fialantsasatra io any Russia isika ary inona ny sakafo hariva mampiavaka ny Noely ato amin'ity firenena ity.
Ny fomba amam-panao eto amin'ity firenena ity dia tsy mitovy amin'ny mahazatra antsika ankehitriny. Te hahafantatra bebe kokoa momba ny Noely any Rosia ve ianao? Mamaky hatrany!
1 Rahoviana no hankalazana ny Noely any Russia?
2 Manao ahoana ny alin'ny Noely any Russia?
3 Haingana ny Advento
4 Sakafo hariva any Krismasy
5 Inona ireo hira Krismasy hiraina ao Russia?
6 Ary ahoana no fomba fankalazan'ny Rosiana an'i Santa Nöel?
7 Ny taona vaovao any Russia
8 Ahoana no ataon'ny Rosiana amin'ny fialamboly amin'ny Krismasy?
Rahoviana no hankalazana ny Noely any Russia?
Ny antokom-pinoana kristiana manana mpino betsaka indrindra eto an-tany, ny katolika sy ny protestanta, dia mankalaza ny nahaterahan'i Kristy amin'ny 25 Desambra. Na izany aza, tsy manao izany ny fiangonana Orthodoksa. Na eo aza ny fizarana ny ankamaroan'ny finoana, fotopampianarana ary fomba amam-panao amin'ireo vondrona etsy ambony ireo, ny ankamaroan'ny patriarka Orthodoksa dia mankalaza ny Noely amin'ny 7 Janoary. Fa inona no antony manosika azy?
Raha ny marina, ny Orthodoksa, anisan'izany ny Rosiana, dia mankalaza ny Noely amin'ny 25 Desambra ihany koa. Izy ireo ihany no manaraka ny kalandrie Julian, izay ny 7 Janoary amin'ny kalandrie gregoriana.
Manao ahoana ny alin'ny Noely any Russia?
Mitovy amin'ny fomba fankalazan'ny katolika ny alin'ny krismasy amin'ny 24 desambra, ny 6 janoary no anaovan'ny Rosiana izany. Amin'ny 10 ora alina, avy amin'ny Katedraly Kristy Mpamonjy any Moskoa, ny filoha dia manao lanonana nentim-paharazana ho an'ny firenena iray manontolo.
Haingana ny Advento
Fantatra tokoa fa ny Advento dia alohan'ny Krismasy, fotoana fiomanana amin'ny fahaterahan'i Kristy. Any Russia izay misy ny finoana ortodoksa manjaka, Ny 28 Novambra ka hatramin'ny 6 Janoary dia tonga ny Advent. Amin'ity dingana ity dia vita ny fifadian-kanina izay mifarana amin'ny andro farany amin'ny Advento amin'ny fifadian-kanina mandritra ny andro. Izy io ihany no azo vakiana sy hanina rehefa mahita ny kintana voalohany ny mpino.
Miresaka sakafo, Fantatrao ve hoe inona ireo lovia mahazatra nohanina amin'ny sakafo hariva amin'ny Noely any Russia? Matetika ny fianakaviana dia manomana fomba fahandro samihafa. Ireto ny sasany amin'ireo mahazatra indrindra:
Kutia: Iray amin'ireo lovia lehibe amin'ny fety. Ireo akora ampiasaina dia misy heviny an'ohatra ao amin'ny fivavahana Orthodoksa. Araka izany, ny varimbazaha dia manondro ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty sy ny tantely izay miteraka mandrakizay. Ny vokatr'izany dia sakafo ara-pombafomba izay ahafahanao manampy voanjo, voaloboka ary masomboly.
Gisa hena: Nandritra ny Advento dia tsy navela nihinana hena ka rehefa tonga ny Krismasy dia nanomana lovia fatratra tamin'ity akora ity ny Rosiana mba hifadian-kanina. Ny gisa roast dia iray amin'ireo lovia malaza indrindra.
kisoa: Lovia iray hafa nohanina tamin'ny sakafo hariva tamin'ny Noely tany Russia ny kisoa mampinono na antsoin'ny Rosiana hoe "kisoa ronono". Arotsaka amin'ny roalahy sy legioma. Mahazatra ny maka azy amin'ny faran'ny Advento mba hamaranana ny fifadian-kanina.
Coulibiac: Ity mofomamy voaroba ity dia mahaliana amin'ny fety rehetra ary matetika atolotra amin'ny sakafo hariva any Krismasy any Russia. Izy io dia azo atao amin'ny karazana koba maro samihafa miaraka amin'ny trondro, vary, hena, legioma, holatra, atody. Toy ny sakafo feno ao anaty mofo iray!
Vinaigrette: Salady nentim-paharazana voaomana amin'ny ovy, karaoty, betiravy, pickles amin'ny vinaingitra sy menaka. Na dia androany aza dia mbola iray amin'ireo lovia ankafizin'ny sakafo hariva any Krismasy satria mora ny manomana sy tsy lafo. Na izany aza, ny fianakaviana te-handray ny traikefan'ny felatanany amin'ny sehatra hafa dia manome trondro mahafinaritra toy ny Sturgeon.
Salady Olivier: Salady iray hafa tena tsotra be hatao mandritra ny fialantsasatra. Manana karaoty, tongolo, atody nandrahoina, ovy, pickle, saosisy ary voanjo. Izay rehetra afangaro amin'ny mayonnaise.
Kozuli: Ity dia iray amin'ireo zava-mamy malaza indrindra any Rosia mandritra ny Krismasy. Ireto ny cookies Krismasy vita amin'ny mofo goavam-be mamy miaraka amin'ny sirrup ary voaravaka siramamy mangatsiaka. Ny endrika mahazatra indrindra anehoana ireo cookies ireo dia anjely, kintana Krismasy, biby ary trano. Izy ireo koa dia ampiasaina ho ravaka fety.
Vzvar: Aorian'ny fisakafoanana krismasy any Russia dia aroso ho tsindrin-tsakafo ity zava-pisotro ity. Izy io dia voaomana ao anaty lafaoro miaraka amin'ny compote vita amin'ny voankazo sy voaroy izay miharo zava-maniry, zava-manitra ary tantely maro. Izy io dia safidy tsara amin'ny divay na punch mafana.
Rakotra mololo ny latabatra, ho fahatsiarovana ny toerana nahaterahan'i Jesosy, ary lambam-pandriana fotsy no napetraka eo amboniny.
Inona ireo hira Krismasy hiraina ao Russia?
Any Rosia, ny hira Krismasy mahazatra dia soloina hira Slavy izay fantatra amin'ny hoe Koliadki. Ity hira ity dia mazàna no mihira ny alin'ny Noely ataon'ny vondron'olona eny an-dalambe mitafy akanjo amin'ny faritra.
Ary ahoana no fomba fankalazan'ny Rosiana an'i Santa Nöel?
Any Russia dia tsy i Mompera Nöel no manome fanomezana ho an'ny ankizy amin'ny fitsidihana ny vavahady tranony fa i Ded Moroz miaraka amin'ny zafikeliny Snegurochka. Ity toetra ity dia mitondra fanomezana ho an'ny ankizy kely amin'ny Taom-baovao, amin'ny kalandrie rosiana amin'ny 12 janoary.
Ny taona vaovao any Russia
Raha heverina fa ny krismasy dia amin'ny 7 janoary ary ny alin'ny krismasy dia amin'ny 6 janoary dia mitohy ny kalandrie rosiana ary mankalaza ny taom-baovao amin'ny alin'ny 12-13 janoary. Ny antoko dia fantatra amin'ny anarana hoe "Taom-baovao." Mahaliana, sa tsy izany?
Hatramin'ny andron'ny sovietika dia izy io no fetibe malaza indrindra amin'ny taona ary amin'ity daty ity dia haingoina matetika ny hazo firy amin'ny Taom-baovao, izay asatroka kintana mena. Marika kominista.
Ahoana no ataon'ny Rosiana amin'ny fialamboly amin'ny Krismasy?
Ny Rosiana dia mifaly amin'ny lafiny maro amin'ny Krismasy. Iray amin'ireo fomban-drazana mahazatra indrindra an'ny Rosiana handany ny fialantsasatra ny mankafy ny lakilasy mitaingina ranomandry. Saika amin'ny toerana rehetra izy ireo!
Ho an'ny ankizy, ny fampisehoana wink dia voalamina, ny lohahevitra lehibe amin'izany dia ny fahaterahan'i Jesosy zazakely sy izay tena tian'ny ankizy kely.
Ny antitra dia misafidy ny handeha hiantsena hitady fanomezana Krismasy. Ny haingo sy ny toeram-pivarotana dia voaravaka jiro, garlande, hazo kypreso, snowman sns. Omena kilalao matetika ny ankizy toy ny amin'ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao ary omena boky, mozika, teknolojia sns ny olon-dehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Sakafo hariva any Krismasy
Stereotypes momba an'i India
Mpilalao sarimihetsika malaza sasany avy any Maroc